ब्राजिलमा कोरोनाबाट किन धेरै बालबालिकाको मृत्यु भइरहेको छ ? – हाम्रो देश
ब्राजिलमा कोरोनाबाट किन धेरै बालबालिकाको मृत्यु भइरहेको छ ?
२ वैशाख, काठमाडौं । ब्राजिलका एक चिकित्सकले जेसिका रिकार्टेका छोराको परीक्षण गर्न अस्वीकार गरे । ती बालकमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो किसिमको कुनै लक्षण नदेखिएको ती डाक्टरको दाबी थियो । त्यसको दुई महिनापछि कोरोनाकै कारण ती बालकको मृत्यु भयो ।
जेसिकाले आफ्नो छोरालाई अस्पताल पुर्‍याइन् र कोरोना परीक्षण गर्न आग्रह गरिन् । जेसिका भन्छिन्, ‘डाक्टरले ओक्सिमिटरबाट जाँच गर्दा बालकको अक्सिजनको स्तर ८६ प्रतिशत थियो । मलाई अहिले मात्र थाहा भयो कि यो सामान्य थिएन ।’
बालकलाई ज्वरो सामान्य देखिएकाले चिकित्सकले भने, ‘चिन्ता गर्ने अवस्था छैन र कोरोना परीक्षण गर्न जरुरी छैन । शायद घाँटी दुख्ने सामान्य समस्या हुनसक्छ ।’ चिकित्सकले जेसिकालाई बालबालिकामा कोरोना निकै दुर्लभ रहेको बताउँदै लुकसका लागि केही एन्टिबायोटिक्स औषधि दिएर घर पठाइदिए ।
जेसिकाका अनुसार एन्टिबायोटिक्स औषधि सकिँदासम्ममा लुकसलाई देखिएको लक्षण त हरायो तर उसको थकान घटेन । त्यसपछि कोरोना संक्रमणको चिन्ता बढ्यो जेसिकालाई लुकसले राम्रोसँग सास फेर्न नसकेको कुरा थाहा थियो । जेसिकाका पति कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले अर्को अस्पतालमा जाँदा कोरोना संक्रमणको खतरा बढ्नेमा चिन्तित थिए ।
जेसिकाका अनुसार छोरालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा अस्पतालमा कृत्रिम तरिकाबाट अक्सिजन दिने मेसिनसम्म उपलब्ध थिएन । लुकसलाई दुई घण्टाको दूरीमा रहेको अर्को अस्पतालमा पठाइयो । त्यहाँ लुकसलाई मल्टिसिस्टम इनफ्लेमेट्री सिन्ड्रोम (एमआईएस)को समस्या रहेको थाहा भयो । यो यस्तो अवस्था हो, जतिबेला भाइरसविरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्कर्षमा हुन्छ । जसको कारण महत्वपूर्ण अंगहरू सुनिन्छन् । विशेषज्ञका अनुसार यो अवस्था ६ सातादेखि बढी उमेरका बालबालिकामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएपछि देखिन सक्छ तर निकै दुर्लभ हो ।
यद्यपि साओ पाउलो विश्वविद्यालयकी महामारी रोग विशेषज्ञ डा. फातिमा मारिन्होका अनुसार महामारी शुरु भएयता एमआईएसको समस्या धेरैमा देखिएको छ । तर सबै मृत्युको कारण एमआईएस नै भने नरहेको उनी बताउँछिन् ।
बालरोग विशेषज्ञ डा. मेनुएला मोन्टेका अनुसार लुकसमा कुनै कारण नहुँदा पनि गम्भीर अवस्था देखिएको थियो, जुन चिन्ताजनक थियो । लुकसलाई एक महिनासम्म आईसीयूमा राखेर उपचार गराइएको थियो । राज्यको राजधानी फोर्तालेजाका बालरोग विशेषज्ञ डा. लोहोना तावारेसका अनुसार कोरोनाबाट संक्रमित पाइएका बालबालिकामा डायबिटिज, मुटुसम्बन्धी र मोटोपनाजस्ता अन्य रोग पनि थिए । तर, लुकसमा कुनै पनि समस्या थिएन ।
डा. फातिमा मारिन्हो बालबालिकालाई कोरोनाको कुनै जोखिम हुँदैन भन्ने कुरा गलत बुझाइ भएको बताउँछिन् । उनले गरेको एक शोधमा उल्लेख्य संख्यामा बालबालिका र शिशुहरू संक्रमित भएको पाइएको छ ।
ब्राजिलका राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारोले लकडाउनको विरोध गर्दै आएका छन् भने मुलुकमा कोरोनाको नयाँ प्रकार (भेरियन्ट) फेला परेको छ । कोरोनाको यो प्रकार धेरै संक्रामक मानिएको छ । पर्याप्त परीक्षण नहुँदा पनि बालबालिकामा कोरोना संक्रमण धेरै देखिएको हो ।
त्यतिमात्र नभई बालबालिकामा कोरोनाको लक्षण पत्ता लगाउन अन्य उमेर समूहका मानिसमा भन्दा गाह्रो हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । त्यसका साथै ब्राजिलको गरिबी तथा स्वास्थ्यसेवाको अवस्था पनि कोरोना संक्रमण बढ्नुको एक कारण हो । २० वर्षभन्दा कम उमेरका करिब ६ हजार जनामा गरिएको अनुसन्धानमा अन्य रोग र आर्थिक तथा सामाजिक कारणले पनि बालबालिकामा कोरोना संक्रमण बढेको पाइएको थियो । सानो घरमा धेरै जना बस्नुपर्ने र गरिब समुदाय रहेका ठाउँमा आईसीयूको व्यवस्था नहुँदा यस्तो अवस्था आएको विशेषज्ञको भनाइ छ । –बीबीसी